Samsung na -arụ ọrụ na ihuenyo ihu abụọ nwere mpịachi | Androidsis
Samsung na-arụ ọrụ na atụmatụ mpịachi ihuenyo abụọ
Dabere na njiri mara ọhụụ ekpughere, Samsung Display na-arụ ọrụ na sọrọ mpịachi ngosipụta na 8 ″ na 13 ″ nsụgharị. A na-atụ anya na oghere ndị ahụ ga-adị njikere n’afọ a, mana o doghị anya mgbe ngwaọrụ mbụ iji jiri ha ga-apụta.
Dika akwukwo Korea nke The Bell, a na-emepụta atụmatụ abụọ dị iche iche: ụdị 'G' na ụdị 'S'. Emere akwụkwọ ozi ndị ahụ iji gosipụta ọdịdị ahụ, mana foto ndị dị n'okpuru kwesịrị ime ka nke a dokwuo anya.
N'ihi ụda ya, ihuenyo 8-inch ga-abụ 'G', ebe ihuenyo 13-inch ga-abụ 'S'. Ha abụọ ga-asọ mpi na-amasị iPad mini na iPad Pro, karị, nke nwere ihu nha.
Dual 'G' ihuenyo mpịachi mpịachi
Dual 'S' ụdị mpịachi ihuenyo
Typedị ihuenyo 'G' ga-ahapụ ihuenyo nọ n'ọrụ na azụ mgbe apịaji. 'Dị 'S', ka ọ dị ugbu a, ga-enwe ihuenyo naanị n'ihu.
Ikekwe ha ga-abụ nke FullHD mkpebi, dị ka nke Fold Galaxy. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na ha ga-egosi echiche ọzọ, anyị enweghị ike ịkwado nke a ma ọ bụ nkọwa ndị ọzọ ... opekata mpe n'oge a. Agbanyeghị, ọ ga - abụ na ụbọchị ma ọ bụ izu na - abịanụ anyị ga - amatakwu banyere ndị a.
N'aka nke ọzọ, ngwaọrụ ndị ga-enwu gbaa ga-abụ nke ọhụụ, dị ka hotara na mbụ Galaxy Fold nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ yana mpịachi Mate X Huawei, nke, dịka ọtụtụ echiche si dị, karịrị ya na nhazi na n'akụkụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ha ga-enweta ihe ndị kachasị ọhụrụ, dị ka Snapdragon 855 ma ọ bụ iche Exynos 9820 nke ụlọ ọrụ ahụ, yana ebe nchekwa RAM adịghị ihe na-erughị 8 GB na ohere nchekwa ọ bụghị ihe na-erughị 128 GB.
N'otu ụzọ ahụ, anyị na-ekwusi ike ọzọ na naanị "nkenke" anyị nwere ruo ugbu a bụ onyogho ndị a. Ihe ọ bụla ọzọ ga-abụ ntụgharị uche ma ọ bụ asịrị, ruo mgbe ụlọ ọrụ ga-eme ya ọkwa ma kwenye ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung na-arụ ọrụ na atụmatụ mpịachi ihuenyo abụọ
Moto Z4 zuru kpamkpam: Snapdragon 675, OLED ihuenyo, 25 MP selfie igwefoto na ndị ọzọ
Realme C2: Thedị ọkwa ọhụụ ọhụrụ nke ika ahụ